HS:- Kulan balaaran oo ay siweyn uga soo qeybgaleen inta badan qurbajoogta Hiiraan loogana hadlay arimo badan oo muhiim ahaa ayaa caawa dhex maray madaxa maamulka Gobolka Hiiraan Col Laqanyo, Saraakiisha ciidamda Amsiom ee Hiil-Walaal iyo waxgarad iyaguna ku sugnaa Magaalada Mogdishu.
Shirka oo iskugu jiray iswareysi iyo dhiiragelin ayaa waxaa marka hore siwada jir ah loogu tacsiyadeeyey dowlada iyo shacabka aanu walaalaha nahay ee Jabouti oo ay dhawaan xoreyntii magaalada Bulo Burde ka soo gaareen dhimasho iyo dhaawacyo iaydoona mudo daqiiqo ah halkaas loogu duceeyey inuu maxariistii Jano ilaah uugu deeqo.
Intaas kedib si ay qurbajoogtu kaalintooda u qaataan waxaa la siieyey meesha ya wax marayaan iyadoona marka laga reebo arimaha ciidamada dowalda Soomaaliya iyo kuwa Hiil-Walaal abaabulkooda meesha uu marayo oo ayed arimo ciidan inta kale qurbajoogta warbixin dhameystiran waa la siiyey hadey shacabka Hiiraan gurmad la gaarayaan iyo hadii ay shirka u sopo galeen waa la hadlaa ee hadla iyo wax la mid ah.
Marka laga soo tago shirka muhiimka ah ee sedax geesoodka ahaa oo laga soo galay Mogdishu, Qurbaha iyo Hiiraan hadane shacabka Hiiraan iyo dowlada Soomaaliya aya si wada jir ah ugu tacsiyadeeyey walaalahooda Jabouti.
Inkasta oo aanu soo koobi karin dhamaan dadkii ka hadlay ee qurbajoogta iyo siyaasiyiinta iskugu jiray hadane waxaa xusid mudan in ay kalsooni weyn ka muuqatay saraakiisha ciidamada xooga dalka SOomaaliyeed qeybta kaka sugan Hiiraan iyo kuwa Hiil Walaal.
Isku soo duuboo marka xayeysiin iyo borobagaando laga daayo waxaad moodaa in uu hada shacabka Hiiraan sidey u dhan yahiin dal iyo dibad uu ka muuqdo biseyl iyo raadinta qarankii Soomaaliyeed halka gobolo ay Galgaduud ugu horeyso ilaa hada ay lugahooda meel iskugu geyn la yahiin oo ay isku dhaxyaacayaan dhawr kooxood oo ay qaarkood magacyo diimed wataan sida Ahalusuna xili ay wadanka ka jirto dowlad dhexe taasi oo muujineyso..............
· admin on March 23 2014 00:38:57 · 0 Comments · 1430 Reads ·
14,633,124 unique visits